Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny Wifi ao amin'ny iOS 8- iOS 8.1.2 | Vaovao IPhone
Pablo Ortega | | Vaovao IPhone, iOS, iOS 8, Fampianarana sy torolàlana
Ny iray amin'ireo teboka malemy an'i Apple dia hita ao amin'ny fifandraisana Wi-Fi an'ny vokatra vokariny. Ny rafitra miasa ho an'ny Mac, OS X, dia mbola misy lesoka amin'ity fizarana ity ary toa miasa mafy ny injenieran'ilay orinasa mitady vahaolana. Raha ny marina, ny OS X Yosemite, ny tsimbadika farany an'ny rafitra fiasa, dia efa nanana fanavaozana maro izay natao hamahana ny olana izay indrisy mbola misy.
Na mpampiasa OS X ianao, na an'ny rafitra fiasan'ny iOS dia mety manana ianao olan'ny fifandraisana Wifi tsy tapaka miaraka amin'ny fitaovanao. Izaho manokana dia nahita bibikely marobe tamin'ny mini iPad iPad voalohany. Ity lisitry ny vahaolana manaraka ity dia hanampy anao hahita fanamboarana, farafaharatsiny vonjimaika, noho ny fahaverezan'ny fifandraisana tsy tapaka.
1 1. Hanavao ny rindrambaiko amin'ny kinova farany
2 2. Vonoy ary esory ny fifandraisana Wi-Fi
3 3. Avereno ny toe-javatra Network
4 4. Esory ny Wifi avy amin'ny System Services
1. Hanavao ny rindrambaiko amin'ny kinova farany
Apple dia namoaka fanavaozana rindrambaiko maro izay natao hanamboarana ny Olana amin'ny fifandraisana Wifi ao amin'ny iOS 8. Hamarino raha havaozina miaraka amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasa ny fitaovanao. Mba hanaovana izany, mandehana any amin'ny Settings- General- Software Update. Raha tsy hainao ny manavao azy dia alao ny kinova farany. Raha ny momba anay dia nanana iPad mini nanavao ny taranaka voalohany izahay, koa nifindra tamin'ny teboka faharoa izahay, izay nanamboatra ny olana.
2. Vonoy ary esory ny fifandraisana Wi-Fi
Ity teboka faharoa ity no vahaolana amin'ny olantsika na, farafaharatsiny, vonjimaika. Rehefa hitanao fa mifandray amin'ny tambajotra Wifi ny fitaovana iOS anao, fa Tsy mandeha i Safari, mamporisika anao izahay hisintona ny rantsan-tanananao avy eo ambanin'ny efijery mba hampisehoana ny Center Control. Tsindrio ny kisary Wifi hamono azy, miandrasa segondra vitsy dia avereno akony indray. Hamarino raha efa mandeha tsara ny fifandraisana Wifi.
Raha tsy mandeha aminao ny dingana 1 sy 2 dia zahao ny "Manadino" ny angon-drakitra tambajotra Wi-Fi izay ifandraisanao ary mankanesa Fikirana- ankapobeny- Reset. Tsindrio ny "Avereno ny fikirakirana tambajotra". Tsy ho voafafa ny angonao sy ny rakitrao.
4. Esory ny Wifi avy amin'ny System Services
Ity no dingana farany mety hamaranana ny olan'ny fifandraisana amin'ny fitaovan'ny iOS 8 anao ary izany dia misy ny fanalana ny serivisy toerana misy ny tambajotra Wifi (izay tsy mampiato ny fifandraisana mihitsy, ny toerana ihany). Mandehana any amin'ny Settings- Privacy- Location- Serivisy rafitra. Esory ny safidy "Fifandraisan-davitra Wi-fi". Hamarino raha efa mandeha tsara ny fifandraisana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny Wifi ao amin'ny iOS 8- iOS 8.1.2
Felipe Andrade dia hoy izy:
Manana iPhone 5S aho, miaraka amin'ny iOS 8 satria mandany fotoana indraindray handefasana hafatra amin'ny WhatsApp, nametraka indray aho avy hatrany am-boalohany, nataoko izay rehetra azo atao ary tsy mihatsara izany. Ny bateria koa maharitra maharitra 2 ora latsaka ny fampiasana ahy. Apple nametraka ny batery.
Valiny tamin'i Felipe Andrade
Eny, amin'ny iOS 8.1.1 tsara kokoa ny ataoko amin'ny iPhone 5 ary koa amin'ny 6, na dia elaela vao nivoaka ny whatsapp dia nivoaka aho
Ny marina dia satria manana iOS 8.1.2 aho dia mahatsikaritra fa misy zavatra sasany tsy mavesatra ary nieritreritra aho fa ny router no ahy, rehefa nandefa sary tamin'ny alàlan'ny WhatsApp dia fitsapana mafy izany. Nofoanako ny zavatra System Services ary toa raikitra ny zava-drehetra. Misaotra betsaka Pablo!
1.- Aza manavao ny iOS 8.
Mila adala be ianao vao miditra eto vao miteny an'io ... tsara
Miaraka amin'ny iPhone 6 misy jailbreak aho ary tsy misy tweak ary naverina amin'ny laoniny avy amin'ny 0 indroa ary isaky ny miditra tenimiafina wifi vaovao aho dia tsy mifandray izany, mivezivezy toy ny mampifandray izy ary tsy mitranga izany, amin'ny wifis maromaro.
Mifandray ihany izy io rehefa mahazo ny efijery mandeha ho azy aho rehefa misy wifis misy ary avy amin'ilay varavarankely miseho ihany, misy olona sendra azy?
r0_4lv dia hoy izy:
Raha manana Jailbreak ianao, ny vahaolana dia ny miditra amin'ny MODE SAFE ary mifandray amin'ny Wi-Fi
Valio i r0_4lv
… Ary miaraka amin'ny WIFRIED napetraka avy amin'ny cydia dia manidina ny wifi. XD
ny Wifi…. Ny lohahevitr'i Apple miandry, dia tonga aho fa tsy nanana olana tamin'ny iphone-ko na ny macbook-ko
ary isan-taona foana dia tsy miova ireo bibikely mitovy amin'ny wifi !!
Willchesky dia hoy izy:
Ao amin'ny iOS 8.1.2 ny olana hitako amin'ny iPhone 6-ko ary ny wifi dia mihoatra ny tsy fahita firy ... Indraindray dia tapaka izy io fa tsy avy amin'ny wifi, raha tsy tapaka ny tamba-jotra ary mametraka ahy tsy misy serivisy .. Tsy misy izany amiko raha tsy amin'ny alàlan'ny wifi ao an-tranoko ... namerina tamin'ny laoniny aho tamin'ny iTunes ary mitohy izany, nitranga izany taorian'ny nametrahako 8.1.2 ... 🙁
Valiny tamin'i Willchesky
Beatleand dia hoy izy:
Misy zavatra hafahafa mitranga amiko amin'ny Wi-Fi ary tsy haiko raha mahazatra ao amin'ny iOS 8. Rehefa manafoana ny angon-drakitra finday aho dia tsy afaka mifandray amin'ny fifandraisana Wi-Fi mihitsy, zavatra mitovy amin'izany no mitranga amin'ny olona iray? Ara-dalàna izany?
Mamaly an'i Beatleand
Ramon Enriquez dia hoy izy:
Sahirana amin'ny WIFI-ko aho, miditra ary miverina amin'ny 4G, ka eo anelanelan'ny iray sy ny iray hafa ary lasa adala, inona no atoro anao ankoatry ny fanary ny iPhone 6-ko?
Valiny tamin'i Ramon Enriquez
Ity wifi ity dia mahatonga ahy adala manana olana be
Manana 5s aho ary efa nanandrana izay rehetra lazainao sy ny pejy hafa ary tsy manome teny miafina amiko izao ... Tsy azoko ny zava-mitranga ary raha misy olona afaka manome ahy tanana!
Mamaly an'i jose c
Vao nividy iphone 5s 64 gb aho ary manana ny olana fa tsy afaka manamboatra azy io satria tsy afaka mihetsika ilay efijery, indrisy fa loza be ny zavatra niainako voalohany tamin'ity fitaovana ity ... Niezaka ny namono azy aho tamin'ny fanindriana ireo singa ananany ... Tsy maintsy hoentiko any amin'ny fanohanana ara-teknika ... ny tena izy dia tokony nitazona ny moto x aho.